Iska yaree cabbirka faylkaaga CSS 20% ama ka badan | Martech Zone
Isniin, April 25, 2011 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Yaraynta feylku ma sahlana… laakiin, sida caadiga ah, waxaa jira qalab meesha yaal oo shaqo weyn kuu qaban kara. Waxaan ka dhacay guud ahaan NadiifiCSS, codsi fiican oo loogu talagalay qaabeynta CSS-gaaga iyo hagaajinta cabirka faylka CSS. Waxaan ku dhex waday faylkeena CSS iyada oo aan hoos u dhigay cabirka faylka 16%. Waxaan u sameeyay mid ka mid ah macaamiishayda waxayna yareysay faylkooda CSS qiyaastii 30%.
Tags: CSScss minifyhagaajinta cssxaashida qaabkawaraaqaha qaababka